Ọrụ ụgbọ njem ngwa ahịa ọnlaịnụ 24X7X365 ụbọchị
Ndị na-akpakọrịta mpaghara na ndị na-ebugharị Mumbai na Bangalore
Ihe kacha mma na ndị na-ebuga Mumbai gaa Chennai
Ndị na-ebuga mpaghara na ndị na-ebugharị Mumbai na Hyderabad ụbọchị 24 × 7 × 365 dị maka ịkwagharị ụlọ yana ọrụ mbugharị ụlọ ọrụ.
IBA kwadoro ndị na-ebubata ihe kacha mma na Mumbai na Pune
Kedu ụdị ọrụ ụgbọ njem ụgbọ ala dị iche iche dị na India, ma kwuo uru ha bara
ngwaahịa njem ọrụ
Ugbo ala dị arọ
Companieslọ ọrụ ndị na-akwagharị akwagharị bụ nhọrọ kacha mma maka ndị chọrọ ịkwaga ngwaahịa ụlọ site n'otu ebe gaa na nke ọzọ. Ụlọ ọrụ ndị a kwa...
Kedu otu ndị ọkachamara na ndị na-ebugharị ihe na-enyere aka ịkwaga n'ime ụlọ ọrụ?
Companieslọ ọrụ ndị na-enyere ndị mmadụ aka ịkwakọ ọrụ ịkwaga ga-enwe ụlọ ọrụ na steeti na obodo dị iche iche dị ka Chennai, Bangalore, Kolkata, na Mumbai. Ndị ọzọ...
2,570debanyere ahaIdenye aha
Anyị niile maara mkpa ọ dị ndị na-ebu ọnụ ụlọ na ọrụ ndị na-ebugharị. Ọ bụ ọkọlọtọ mara mma na ọtụtụ ndị ọrụ nọ n'ime obodo kwesịrị ịgbanwe ihe ha ...
Na narị afọ nke 21 a, ọtụtụ n'ime anyị na-arụ ọrụ na ngalaba dị iche iche nke onwe. Ọrụ ndị dị otú ahụ chọrọ isi n'otu obodo gaa n'ọzọ maka ịdị nso...
Ọrụ njem ụgbọ ala dị oke mkpa n'ịkwagharị ngwa ahịa na mbufe site n'otu ebe gaa n'ọzọ na mba ahụ dum. Ọrụ ụgbọ ala mgbazinye na-arụ nnukwu ọrụ...
123...73Page 1 nke 73
ngwaahịa njem ọrụ293
ọrụ njem ngwa ahịa dị m nso216
ibu njem na ngwa ngwa ụlọ ọrụ72
ụlọ ọrụ na-ebuga ngwongwo55
Ụdị ụgbọ ala azụmahịa37
akwụkwọ akụkọ mgbasa ozi njem33
Soro anyị na Instagram @heavyhaulagetrucks
Kedu ihe bụ azụmahịa na ụlọ ọrụ ndị nwere mmetụta pụrụ iche na akụ na ụba ụwa?
Azụmahịa nke a na-ahụ karịsịa na gburugburu ebe obibi, akwụkwọ akụkọ, ahịa mgbe niile bụ ndị a:-
Ụlọ ọrụ na-eme mmanụ
Ụlọ ọrụ ikuku
Ụlọ ọrụ akwụkwọ
Ụlọ ọrụ owu akwa
Ụlọ ọrụ Agro
Ụlọ ọrụ osisi sugar
Ụlọ ọrụ TEA
Ulo ogwu ogwu
Eletriki na ụlọ ọrụ eletriki
Ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ Peb Pre ​​engineered
Ụlọ ọrụ akụrụngwa akpaaka
Ụlọ ọrụ biotechnology
Ụlọ ọrụ plastik
Ụlọ ọrụ ụgbọ oloko
Ụgbọ elu na ụlọ ọrụ ụgbọelu
Courier na Parcel Industries
Ụlọ ọrụ ụgbọ njem
igwe eji ewu ulo
Ụlọ ọrụ batrị
Ụlọ ọrụ nchekwa tankị
Ụlọ ọrụ na-ebugharị ụwa
Ụlọ ọrụ ji esi mmiri ọkụ
Ụlọ ọrụ pipeline
Ụlọ ọrụ Biscuit chocolate
Ụlọ ọrụ uwe
Ụlọ ọrụ kemịkalụ
Ụlọ ọrụ Packers Movers
Ụlọ ọrụ silk
Ụlọ ọrụ rọba
Ụlọ ọrụ anyanwụ
Ụlọ ọrụ crane
Na nkezi, ụdị gwongworo ụgbọ ala ahịa ole dị n'ụwa?
Ọtụtụ gwongworo ụgbọ ala a na-ahụ anya n'ụwa bụ ndị a
Ụgbọ ala Obere (Tempo MCV)
Ụgbọ ala azụmahịa nke etiti ICV
Ugbo ala LPT (Ugbo ala Platform ogologo)
Ụgbọala HMV (ụgbọ ala dị arọ)
Mepee ụgbọ ala Platform
Ụgbọ ala ahịhịa
Ụgbọala mkpofu dị ize ndụ
Ụgbọ ala akpa
Ụgbọ ala na-ebu onwe ya
Ilergbọ ala ụgbọala
Nkeji ụgbọala na-adọkpụ
Ugbo ala dị larịị
Ụgbọ ala tanker
Ụgbọ ala Dumper
Ihe igwekota ihe nwere nnukwu gwongworo
Ụgbọ ala friji
Ụgbọ ala na-ebu ụgbọ ala
Ụgbọala nnukwu anụ mmiri buru ibu
Kedu ihe bụ India?
India bụ ala Devbhoomi na Eze Bharat dị ebube. N'ihi ịdị mfe, dị mfe, dị elu na ihe ịga nke ọma, n'ime afọ 1000 gara aga, ọtụtụ ndị mwakpo si mba ọzọ abịawo jiri aghụghọ mebie ya ma mebie omenala ahụ ma manye anyị àgwà nzuzu site n'ịgwa ezigbo mmepeanya anyị na-adịghị ike. N'ihi ya, anyị amaghị Hindi ma ọ bụ ghọta Urdu enweghị ike ịsụ bekee.
Kedu ihe bụ koodu nzi ozi nke India?
Koodu nzi ozi nke ndị India mebere, lelee koodu nzi ozi ọnọdụ na koodu nzi ozi gị:-https://www.indiapost.gov.in/VAS/Pages/findpincode.aspx
Osimiri ole na India?
183 + Rivers na India Ref site na:- www.pincodeindia.net/list-of-rivers-in-india.php
Mpaghara ole na India?
Mpaghara 718 India.
Kedu steeti kacha na India?
Rajasthan (342,239 sq km) bụ steeti kachasị ukwuu na India n'ihe gbasara mpaghara .
Kedu ihe bụ pan India?
PAN India ? n'ụzọ bụ isi pụtara ọnụnọ n'ofe mba. Ọ bụ okwu na-agụnye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile gbasara ma ọ bụ metụtara India. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịbụ gbasara ụlọ ọrụ, azụmahịa, na ihe ọ bụla nke mba ahụ.
Ụgbọ ala ole ka ị nwere na mkpokọta?
Anyị nwere Gwongworo 5000 ejikọrọ si 638 mpaghara nke anyị na-ebu ma ọ bụ weghachite ibu site n'obodo ukwu, ime obodo, metro na ebe ndị siri ike. Tinyere nke a, anyị na-enye ha taya, batrị, akụkụ mapụtara na amụma mkpuchi na ọnụ ahịa ndị na-ere ahịa. Na 40% nke uru nke usoro a dum na-enye obere onyinye nye ezinụlọ nke ndị ọkwọ ụgbọ ala mberede maka ego ego ma ọ bụ ahụike. Ka ndụ ya na-anwụ anwụ wee ghara ịkwụsị n'ihu onwe onye.
Ụgbọ ala ole dị na India?
Site na isi mmalite, enwetara ozi na nkezi gwongworo azụmahịa 80 lakh na-arụ ọrụ na India. N'ime ha naanị 20% na-arụ ọrụ kwa ụbọchị.
Nke fọdụrụ 30% nke gwongworo chere ogologo oge ka ọnụọgụ ha pụta na ụlọ ọrụ na-ebu ma ọ bụ na-ebupụ.
On 15% n'okporo ụzọ, gwongworo ndị ọchịchị kụdara na-eguzo n'okporo ụzọ awara awara iji nweta nrụrụ aka.
10% nke gwongworo na-adọba ụgbọala n'ihi breeki dara ma ọ bụ enweghị ọkwọ ụgbọ ala.
Na nke fọdụrụ 25% nke gwongworo na-echere ibu nloghachi na obere obodo, mpaghara ma ọ bụ ebe ndị dịpụrụ adịpụ nke India.
ọnọdụ nke ndị ọkwọ ụgbọ ala dị njọ nke ukwuu n'ihi na ọ naghị enweta ezigbo ibu.
Kedu ihe bụ njem njem?
Transportgbọ njem na-agafe agafe anaghị achọ ntinye ume. Ihe atụ nke njem na-ebugharị bụ mgbasa, mmegharị nke ụmụ irighiri ihe site na mpaghara nke itinye uche dị elu gaa n'ebe dị ala. Protein ndị na-ebu ibu na protein ọwa na-etinye aka na mgbasawanye nke ọma.
Kedu ihe kpatara ụgbọ njem na logistics ji dị iche na ụlọ ọrụ niile?
Enwere ọtụtụ ihe kpatara nke a, n'ihi nke a na-ahụkarị mmetụta ndị na-esonụ n'ihi echiche dị warara.
Gọọmenti edobeghị ụgwọ ụgbọ ala maka kilomita na ụlọ ọrụ ụgbọ ala.
Njikọ ụgbọ njem adịghị ike
Enwebeghị mmepe a na-atụ anya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ mandis n'ebe niile.
N'ihi ikeketeorie, ọchịchị mmadụ ole na ole ka e wulitere na azụmahịa a, onye ikike aka ike na-agba.
Sadhus ndị a, ndị nna, ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị mba ọzọ na-eji ego ojii kwalite ikekete ego na ijide azụmahịa. Na-ejikwa ụzọ ime ihe ike maka uru. A na-ahụ akụkọ ndị a n'akwụkwọ akụkọ.
N'ihi enweghị ịdị n'otu, ọrụ ọchịchị na-abawanye na ndụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ghọrọ nhụsianya. Ọbụna mgbe ha rụsịrị ọrụ awa 18 ruo 20, ndị ọkwọ ụgbọ ala enweghị ike igbo mkpa ha.
Ọnụ ego ụgbọ ala na akụrụngwa na-adị ọnụ kwa ụbọchị, mana ụgwọ ụgbọ ala amụbabeghị kemgbe afọ iri gara aga na mmefu abawanyela karịa 80%.
Ndị njem na-akwụ ụtụ 18% ruo 28% na mmefu ọ bụla mana ọ nweghị uru nkwụghachi tagzi ọ bụla.
Enwere nsogbu nke nlọghachi azụ mgbe niile. Ibu nlọghachi site na Tier 2 Tier 3 obodo ga-echere ụbọchị ise ruo iri. Ibu anaghị adị site na ebe ndị ọzọ.
N'ihi gburugburu ebe obibi na-adịghị ize ndụ, nsogbu akụ na ụba, nrụrụ aka na omume ọjọọ nke ndị mmadụ mgbe niile, onye na-anya ụgbọ ala na-ejide ịṅụbiga mmanya ókè, n'ihi nke ihe mberede na-abawanye.
Nchekwa ịkwụ ụgwọ ibu na mwepu zuru oke
Gọọmenti na iwu gọọmentị anaghị arụ ọrụ anyị.
Ihe niile a dị n'elu ga-emetụta ngwa ngwa na ọnụ ahịa njem gị.
Mara: - Afọ iri gara aga ọnụ ahịa njem bụ 5% nke ngwaahịa gị. Ugbu a ọ gbagoro site na 8 ruo 30%
Kedu ihe dị iche n'etiti Transport v/s Logistics?
Ụgbọ njem bụ NKWUKWU OKWU ALA na logistics bụ Ijikwa ebufe ngwongwo n'ime na n'èzí site na onye nrụpụta ruo na njedebe ruo ọgwụgwụ….
Kedu ka esi amalite azụmahịa njem na India?
99% nke ndị na-ebu njem n'India bụ mpaghara ala na nke akụ na ụba. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme otu azụmahịa ahụ, mgbe ahụ ọ ga-amalite na 20 ruo 50 lakh rupees nke ga-abụ. mechiri na ọnwụ na afọ 5. Ma maka ọganihu na ezigbo azụmahịa, ị chọrọ isi ego karịrị 10 crore, ndị ọrụ nwere nkà, nkà na ụzụ dị elu, ahụmahụ 2 iri afọ na ihe ọmụma zuru oke nke ala dị mkpa.
Kedu ụdị ụgbọ njem dị ọnụ ala na India?
Mmiri, ala na ikuku, na nkezi, ihe ndị a niile dị na mba ọ bụla maka njem, ma na-eburu ebe ahụ n'uche, a na-ekpebi dịka ọnọdụ ahụ si dị. Anyị na-enye ụdị ọrụ ụgbọ njem 32 dị na India na mpaghara Eshia nke nwere ike ịdị ọnụ ala ma baa uru maka gị.
Kedu ka esi enweta akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala na India?
Gọọmenti emeela ọtụtụ mbọ na ịnweta akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala dị mfe, mana ọ na-esiri ike ịnweta akwụkwọ ikike na-enweghị onye nnọchi anya. Onye ọrụ na-ekpebi ọnụahịa ikpeazụ ya. Na nke a na-eme laxity achọrọ dị ka ego si dị na ya mere mpụ na ihe mberede yiri ka ọ na-arịwanye elu na-aga n'ihu. Site na NGO ọhụrụ anyị, ọ bụ mgbalị anyị iji nye ndị nọ ná mkpa ikike nke ọma ọzụzụ nke ọnwa 6 n'efu. Ka ndị nọ ná mkpa na-enweghị ọrụ nweta ọrụ na ọha na eze nweta ezigbo ndị ọkwọ ụgbọala dị elu. Anyị nọ ugbu a na nhazi ego maka ọrụ a dum.
Gịnị bụ nnukwu echiche na-ezighị ezi na azụmahịa njem?
Na-eleghara ọdịdị ala na ikike na azụmahịa njem, a kwenyere na ndị nwe ụgbọ ala na-arụ ọrụ na ọnụ ala dị ala ọbụna mgbe oke ụgwọ, ọrụ na mmefu.
Kedu ihe bụ nọmba njem?
Ụgbọ njem okporo ụzọ + 919408275245
Kedu usoro izipu kacha mma?
Anyị na-ajụ 33 ajụjụ ndị ahịa anyị na anyị na-enye 2 ma ọ bụ 3 dabere na ha chọrọ, mmefu ego ruru na ibu. A na-ezigara gwongworo ahụ maka ibu naanị mgbe ị nwetasịrị usoro ọrụ yana 20% n'ihu dịka onyinye nke akwadoro. Mgbe nbudata, mezue niile akwụkwọ. Ma nara nguzozi 80% ịkwụ ụgwọ. Na kwa ụbọchị na-agwa onye ahịa banyere ọganihu nke ọrụ ya. Mgbe ebutuchara na ebe ebe a na-aga, a na-enweta nzaghachi site n'akụkụ abụọ maka nkwalite ha n'ọdịnihu.
Enyemaka gọọmentị ugbu a na nkwalite azụmahịa India?
Ndị ọkachamara n'ihe gbasara ụlọ ọrụ na-ekwukarị na gọọmentị chọrọ ịtachi obi n'itinye aka na itinyekwu ego na ngalaba ndị a. Na Gọọmenti ugbu a na-etinye uche n'ihe dị iche iche dị ka agụmakwụkwọ, akụrụngwa, ahụike, njikọta na ndị ọzọ. Ihe ndị a niile bụ akụkụ ndị bụ isi na-eme ka uto ahụ pụta site na mbelata akụ na ụba. Enwere ọtụtụ narị ndị ọchụnta ego yana mmalite na ngalaba nrụpụta ka emelitere na akụ na ụba. Gọọmenti ewepụtala usoro ụfọdụ maka ịtụte akụ na ụba na-akpalite uto. India na-anabata mkpa maka nrụpụta yana mpaghara ọrụ ndị ọzọ mgbe ahụ 80% nke GDP ga-akawanye mma.
Kedu ihe bụ ngalaba ndị ahịa? Kedu ka klaasị ndị ahịa India siri dị?
Nkewa nke ndị ahịa abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị omume nke ikewa onye ahịa n'ime otu. Ọ na-eji ọtụtụ ihe metụtara ahịa eme ihe. N'ihi ya, ọ na-ekere òkè dị mkpa n'igbo mmasị n'ozuzu ya na mmefu ego. Yabụ, a na-akpọ ya iji nyochaa ụzọ ndị akọwapụtara na mkpa ahịa.
Ọtụtụ nde ndị bi n'India nwere ọnụ ọgụgụ kachasị ukwuu nke klaasị ntọala. A na-ewerekwa ya dị elu n'ihi oke ahịa ahịa India. Ọ na-agụnye klaasị etiti, ọkachamma na okpuru-nkezi klaasị. Ọ nwere uru akụ na ụba na-ejubiga ókè ma mgbe ụfọdụ na-etinye aka n'ọnọdụ adịghị mma. Nyochaa nchekwa data na-ekpughekwa nnukwu klas ndị India.
Kedu ihe kpatara ọdịdị ala dị iche iche na-eme ka o sie ike maka ụlọ ọrụ azụmahịa multistate na India?
Agbụrụ, omenala, agbụrụ, okike na ụdị njirimara ndị ọzọ na-ekpebi ka ndị mmadụ si mara, hụ ma hụ ụwa. Ndị si gburugburu ebe dị iche iche na-eche echiche, meghachi omume ma mụta ihe dị iche iche. O siri ike maka ụlọ ọrụ azụmahịa multistate na India ka ha na-agbalị ịghọta ndị ọrụ ha. Nke kachasị nke ọma, ọdịiche mpaghara ga-eduga na enweghị ịdị n'otu n'ime nzukọ a. Ọ bụrụ na ejiri ya nke ọma, ọdịdị ala dị iche iche nwere ike inye nghọta na amamihe dị n'ime ụlọ ọrụ azụmahịa ọtụtụ steeti. Companieslọ ọrụ ndị dị n'India enweghị nsogbu karịa na azụmaahịa steeti dị iche iche a na-akwụ ụgwọ. Ọ bụ n'ihi na usoro a dị ntakịrị mfe.
Enwere ụgbọ ala azụmaahịa na-arụ ọrụ nke ọma dị na India dị ka a tụrụ anya ya?
Mgbanwe na India na-aghọ ihe ezi uche dị na ya na gọọmentị ugbu a kwadoro na nnukwu mkpagharị na eletriki. Ndị gọọmentị na-eche echiche - NITI Aayog na-ebute ụzọ ngbanwe maka ịbawanye ụdị ụgbọ njem efu na-enweghị ikuku. A na-ahụta ọtụtụ ụgbọ ala Multi-Axle (MATs) dị ka ụgbọ ala azụmaahịa nke ọma dị na India ma jiri ya mee njem ụgbọ njem. Ụgbọ ala ndị a na-esite na ton 26.2 ruo ton 49 dị oke arọ. Awụlila ire ụgbọ ala ndị a n'etiti 2009 na 2010 ka 55% dị elu. Emeberela ụgbọ ala azụmaahịa nke ọma n'ọkwa kachasị elu 60% nke ahịa ụgbọ ala azụmaahịa ka emelitere nke ukwuu.
Kedu ihe dị iche iche na ngwa ngwa ma ọ bụ ụgwọ njem na India?
Ngalaba njem njem nke India buru ibu ma dị iche iche. Ọ nọ na-eme nnukwu ihe ngwọta maka njem njem n'okporo ụzọ. Maka ịkwagharị ngwa ahịa na ngwaahịa, njem okporo ụzọ dị ezigbo mkpa yana gụnyere omume dị mma. Ọ nwere ọtụtụ nsonaazụ yana ọtụtụ mbubata na-adabere na njem n'okporo ụzọ. Ọzọkwa, ọnụ ahịa ụgbọ njem na India dị ọnụ ala ma dabere na nha azụmahịa. Ọ na-arụ ọrụ site na mbipụta nke na-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-ewe oge maka mkpa njem. Yabụ, nweta ya dabere na ụdị dị iche iche na ngwa ngwa na ọnụ ahịa njem bụ naanị mpaghara azụmaahịa.
Kedu ihe bụ nnukwu ibugharị Oversize ODC njem dị mfe na India?
A na-agbakwunye ODC, nke a na-akpọ ibu ibu karịrị akarị kpamkpam n'èzí nke ụgbọ ala maka ibugharị ngwa ahịa buru ibu. Ma ogologo na ịdị elu nke ibu dị ukwuu karịa ụgbọ ala ọkọlọtọ. A na-eji ibu ndị a dị arọ eme ihe ma n'akụkụ ụlọ na nke azụmahịa. Ụgbọ njem ODC na India nwere ike inyere ndị mmadụ aka ibugharị ngwa ahịa ha dị arọ site n'otu ebe gaa na nke ọzọ ngwa ngwa. Ọ bụ n'ihi na ụgbọ ala ndị a nwere ọtụtụ ngwaọrụ ọgbara ọhụrụ. Ha nwere ike ibu ngwa ahịa dị arọ n'ebe dị anya. Onye na-ahụ maka ọrụ ụgbọ njem nwere ahụmahụ zuru oke na mpaghara a, ya mere ndị otu ahụ na-eme ka usoro njem njem n'ozuzu ya ghara inwe nsogbu.
Kedu ezigbo ngwongwo ndị na-emepụta ụgbọ ala azụmahịa bụ ndị ama ama n'ụwa?
Enwere ọtụtụ ndị na-emepụta mpaghara ma ọ bụ mpaghara ma ọ bụ ngalaba mgbakọ na-eme ụgbọ ala azụmahịa n'okpuru ọtụtụ aha. Mana anyị ga-eso gị kerịta ndepụta nke ndị na-emepụta gwongworo dị arọ dị elu, dị mma na nke dị elu.
Kpakpando nke Western
Ụlọ ọrụ Navistar International
Caminhões na Ônibus
Steeti ole na India?
India nwere 29 na-ekwu. E nwekwara 7 mpaghara otu .Ma site n'echiche nke ịdị mfe na mmezu, anyị na-ele ha anya dị ka mpaghara na-esonụ.
South India :- Andhra Pradesh ,Karnataka , Kerala ,Tamil Nadu ,Telangana , Mmiri mmiri (ma ọ bụ Puducherry),
Western India :- Maharashtra , Goa ,Gujarat , Dadra na Nagar Haveli , Daman & Diu ,Rajasthan
Asụsụ ole na India?
N'India, anyị nwere ihe karịrị 1600+ asụsụ bụ asụsụ obodo ndị mmadụ. Na mpaghara dị iche iche nke mba anyị asụsụ dị iche iche ka ndị obodo ahụ na-asụ.
Kedu akwa mmiri ole na India?
Akwa akwa 200+ na India mana n'ihi nrụrụ aka adịghị mma.
Obodo ole dị na India?
Obodo 6,64,369 dị na India .
Kedu steeti na mpaghara otu na India?
India nwere 29 na-ekwu. E nwekwara 7 mpaghara otu.
Kedu ihe bụ GDP nke India?
GDP N'ọnụ ahịa dị ugbu a na 2020-21 ka a na-eme atụmatụ na Rs 197.46 lakh crore megide atụmatụ edegharịrị mbụ nke Rs 203.51 lakh crore na 2019-20, na-egosi mbelata nke -3.0% Pasent ma e jiri ya tụnyere 7.8 pasent na 2019-20, ozi kwuru.
Gịnị bụ oge na India?
UTC/GMT +5:30 awa
Kedu gwongworo kacha mma?
Enwere ọtụtụ ndị na-emepụta gwongworo na India, bụ ndị na-agbaso ihe ọhụrụ ahụ kwa ụbọchị. Ma ka dị ka nyocha nke okporo ụzọ awara awara
Ugbo ala TATA: - Kachasị mma maka ire ere, ndozi na nchekwa mmanụ
Ashok Leyland:- Kachasị mma maka Ugwu Side Movement.
Eicher: - Nnukwu mmanụ ụgbọ ala, Sistemụ na-emebi emebi, nke dị mma na ịnya ụgbọ ala.
Ugbo ala Mahindra: - Nke ama ama na ngalaba Ngwuputa
Bharat Benz: - Ibu ibu ibu dị arọ
ISUZU: - Akụkụ LCV kacha mma maka obere mmadụ nkịtị maka azụmahịa mpaghara.
Ụdị ụgbọ ala na akụkọ ụgbọ ala niile:- Biko Pịa
Kedu ụzọ ụgbọ njem dị iche iche?
N'ọmụma m ụzọ na ụdị njem dị iche iche dị ikuku, mmiri, na njem ala, nke gụnyere okporo ụzọ ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ oloko, ụdịdị na-abịa ụzọ eriri na usoro drones
Kedu ihe bụ njem na nzikọrịta ozi?
Ụgbọ njem nwere ọrụ dị mkpa na ọrụ akụ na ụba. Enweghị ike ịnweta akụrụngwa na ahịa, uto na mmepe akụ na ụba agaghị ekwe omume. Ya mere, usoro njem dị irè bụ isi ihe na-enyere aka mmepe akụ na ụba na-adịgide adịgide.
Gịnị bụ nkezi ego nke njem lọjistik na njem?
Ụgbọ njem ngwa ahịa General Rupee 15 kwa ton kwa kilomita
Ụgbọ njem ngwongwo buru ibu Rupee 25 kwa ton kwa kilomita + Ọnụ ikike niile
Usoro na ọnọdụ dị
Kedu onye bidoro ụgbọ njem decarbonising na India?
International Transport Forum (ITF) na National Institute for Transforming India (NITI Aayog), ejikọtala ọnụ na-arụ ọrụ Decarbonising Transport in Emerging Economes (DTEE) na India.
Kedu ka esi ebufe anụ ụlọ na India?
Pet bụ anụ ụlọ. Na mba na-emepe emepe dị ka India, ebe ọrụ njem ọha na nke ngwaahịa adịghị mma, ọ na-esiri ike ịchọta onye na-ebu anụ ụlọ. Anyị na-enyere gị aka ịchọta onye na-ere ahịa kacha mma na echiche arụmọrụ.
Kedu ka esi enweta akwụkwọ ikike njem na India?
Ndebanye aha ụlọ ọrụ mmalite obere njem site na ọdụ ụgbọ mmiri MSME yana nọmba ndebanye aha sitere na Portal GST dị n'efu nye onye njem ọhụrụ n'ime otu izu. Ọ bụrụ na ịnweghị ike, mgbe ahụ GRAHAK SUVIDHA KENDRA ga-eri gị Rs.500. Na nkezi, a ga-arụ ọrụ gị ruo mgbe azụmahịa nke 20 lakhs. Mgbe nke a gachara, mmefu akwụkwọ ga-abawanye na ego gị na azụmaahịa gị. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, a ga-eme ndebanye aha mpaghara ma ọ bụ mpaghara.
Kedu ihe bụ njem?
Usoro nke na-ewere ọnọdụ na mbufe mmadụ ma ọ bụ ngwongwo ka a na-akpọ njem. Ebumnuche nke ịkwaga ma ọ bụ njem bụ nkezi uru n'ọtụtụ ụzọ.Mainly ya atọ na-ewu ewu na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ bụ mmiri ụgbọ njem, ikuku ụgbọ njem, okporo ụzọ njem. ndị ọhụrụ na-ajụ dị ka ụzọ ụgbọ oloko, eriri, drones na-arụkwa ọrụ ma na-etolite.
Kedu ụdị ụgbọ njem ole?
Tumadi ya atọ ewu ewu na-arụ ọrụ na- njem mmiri, ụgbọ elu, njem okporo ụzọ.Ugbu a, usoro ọhụrụ dị ka ụzọ ụgbọ oloko, okporo ụzọ, drones na-arụkwa ọrụ na n'okpuru development.we capable 32 ụdị arọ haulage okporo ụzọ njem ọrụ.
Ọnye na-bụ Minister Transport of India?
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT Highway & Mbupu
"Ụgbọ njem Bhawan" 1, Sansad Marg, New Delhi - 110001
Ekwentị:+91 11-23711252, 23710121
Kedu ihe pụtara na ojiji nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ n'eziokwu?
Ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ, n'eziokwu, bụ ụlọ ọrụ na-etinye aka na azụmahịa ahụ. Enwere ike ịhazi ụlọ ọrụ ahụ n'ọtụtụ ụzọ. Ụlọ ọrụ nwere ike ịbụ ụlọ ọrụ, onye nwe ya ma ọ bụ n'okpuru mmekọrịta. Dabere na ụlọ ọrụ dị iche iche ị na-arụkọ ọrụ, ọ nwere ike ịbụ nke otu onye ma ọ bụ ọbụna otu ndị mmadụ. Enwere ike ịhazi ụlọ ọrụ ahụ nke ọma n'ọtụtụ ọnọdụ. Ọrụ bụ ụdị ụlọ ọrụ dị mkpa nke a na-echekarị. Ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ dị na India nwere ọganihu dị ukwuu site na nkwalite na nkà na ụzụ ọgbara ọhụrụ na ebe ụgbọ njem na mba ahụ niile.
Mmetụta dị aṅaa ka mmasị ọha na eze nwere na ụlọ ọrụ ma ọ bụ mmepụta ihe?
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere mmetụta dị ukwuu na ọha mmadụ na ndị mmadụ ga-atụ anya mgbanwe ụfọdụ na mba ahụ. Dabere na mmasị ọha na eze na ụlọ ọrụ, uru na ọrụ na-aga elu. Ọ mụbara n'ime obodo na ndị mmadụ kwagara n'ime ime obodo na-achọ mmepe. Ụgbọ njem n'okporo ụzọ, ụfọdụ mmepe na-ebute ụzọ maka enyemaka ọha. Ọganihu akụ̀ na ụba ewerewokwa na mgbanwe mgbanwe nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ọ welitere mgbanwe mmekọrịta ọha na eze n'etiti mmasị ọha na eze na mmepụta ihe. Mgbanwe ewepụtala ịtụle mgbanwe dị ukwuu na njem njem n'akụkụ ụlọ ọrụ. A na-akwụ ndị ọrụ ụgwọ ma na-erite uru n'ichepụta ngwa ahịa.
Gịnị bụ Logistic na ihe na-arụ ọrụ?
A na-eji ngwa ngwa ngwa ngwa na-ezo aka na usoro mbugharị akụrụngwa gụnyere akụrụngwa, ngwaahịa, ngwa na ngwa ahịa site n'otu ebe gaa na ọzọ n'ebe ezubere iche. A na-eji okwu a n'ọtụtụ ngwa. Enwere ụdị ngwa ngwa dị iche iche dị mana njem ụgbọ njem na-enweta ama karịa n'etiti ndị ọkachamara azụmaahịa. Ọ bụ n'ihi na ọ bụrụ na ngwaahịa ma ọ bụ ihe azụmahịa enweghị ike iru ndị ahịa, ọ ga-ada. Ọ bụ ebe kwesịrị ekwesị mgbe njem okporo ụzọ na-arụ ọrụ dị mkpa. Ọ na-emetụtakwa ọtụtụ akụkụ azụmahịa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ngwaahịa ndị a na-ebuga ndị ahịa gị n'oge, ọ ga-abawanye uru nke ụlọ ọrụ.
Ụdị ụgbọ njem ole ka a na-eji karịa na India?
Site na mmepe obodo ngwa ngwa na India, uto akụ na ụba nke mba ahụ abawanyela. Emeziwanyela usoro ụgbọ njem ka ọ bụrụ ụdị dị iche iche dịka njem njem okporo ụzọ, ụzọ ụgbọ oloko, ụgbọ mmiri dị n'ime ala, ọdụ ụgbọ elu, na ụgbọ elu, mbupu mmiri na ọtụtụ ndị ọzọ. Ụzọ okporo ụzọ bụ ụzọ kachasị esi ebu ihe dị ka 85% nke mkpokọta okporo ụzọ a na-emepụta na mba ahụ. India nwere ihe dị ka ụgbọ ala ndebanye aha nde 191.7 yana ọnụ ọgụgụ uto Compound kwa afọ sitere na mkpokọta ụgbọ ala edebanyere aha na India ka emelitere ka ọ bụrụ 94%. Site na mmụba nke ọnụ ọgụgụ ụgbọ ala n'okporo ụzọ, ọ na-emeghekwa ụzọ maka mmepe azụmahịa.
Kedu ihe adịghị mma nke azụmahịa njem?
Nke a bụ mmejọ nke azụmahịa njem dịka ndị a:
Ụgbọ njem ihe mberede na-emekarị na India dị ize ndụ. A naghị eme usoro nchekwa dị mkpa megide ihe mberede okporo ụzọ.
Ụzọ ezughị oke Ọtụtụ okporo ụzọ dị na India ezughị oke ma dịkwa n'ụdị ọjọọ. Enwere naanị okporo ụzọ dị kilomita 34 kwa mpaghara 100 sq.km.
Ụtụ isi dị arọ Ọ bụ mwepu ọzọ nke azụmahịa njem njem. Ibu ụtụ isi n'otu ụgbọ ala na mba a bụ Rs. 3500.
Ndozi okporo ụzọ adịghị mma na India adịghị edozi nke ọma. Enwere naanị 0.1% nke ego mba na-etinye na mmezi okporo ụzọ na India.
Ọnụ ego mmanụ dizel na mmanụ na-arị elu Ọnụ ego ụgbọ njem na-arụ ọrụ na-arị elu mgbe niile.
Ọdịghị adabara nnukwu ngwongwoỌ adabaghị maka ngwongwo dị arọ
Gịnị bụ isi nsogbu azụmahịa na India?
Kemgbe oge ochie, ndị India na-akwalite udo. Azụmahịa abawanyela nke ukwuu ruo ọkwa kacha elu mana enwerekwa nsogbu ụfọdụ nke ọtụtụ azụmaahịa na-eche ihu. Ma ọ metụtara ọchịchị, mpụ sitere n'aka 'ndị chi', ọnọdụ okporo ụzọ, nrụrụ aka, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, a na-emetụta azụmahịa ahụ n'ọnọdụ ụfọdụ. Nrụrụ aka bụ ọrịa kachasị njọ nke na-agbasa na India n'ihi ya, ọ dị mkpa iji nlezianya na-edozi ya ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na obodo anyị chọrọ mgbanwe dị iche iche ugbu a n'okpuru bụ ụfọdụ ihe dị mkpa anyị kwesịrị ịtụle maka ime ya ozugbo.
- Nrụrụ aka
– Amaghi akwukwo
- Usoro agụmakwụkwọ
– Isi ịdị ọcha
- Usoro nlekọta ahụike
– Ịda ogbenye
– Nchekwa ụmụ nwanyị
Kedu ihe na ole na-adaba na mmetụta azụmahịa ọjọọ nke ọrụ ụgbọ njem na-adịghị mma?
N'ihi ọrụ ụgbọ njem na-adịghị mma, ọtụtụ azụmahịa nwere mmetụta dị ukwuu. Ihe ndị na-ebugharị ngwa ahịa ga-eri ebe emetụtara n'ihi njem okporo ụzọ adịghị mma. Ọ na-agụnye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe iburu n'uche na mmepụta ga-n'okpuru. Maka ịchịkwa ọnọdụ a, ụgbọ njem na-adịghị mma kwesịrị imeri ngwa ngwa o kwere mee. Ọ na-abawanye okporo ụzọ zuru oke n'ime ime obodo na-ebuli mmepụta. Maka ntinye ọrụ ugbo na ahịa, njem okporo ụzọ dị mkpa. Yabụ, njem ụgbọ njem na-adịghị mma ga-edozirịrị site na iji nha kwesịrị ekwesị. Karịsịa n'ime ime obodo, njem dị mkpa iji rụọ ọtụtụ ihe nke ọma. Yabụ, gọọmentị ga-emerịrị usoro kwesịrị ekwesị iji gbanarị echiche a na-ezighi ezi ma mee ihe kacha mma maka ịkwalite njem njem.
Amụma gọọmentị India kacha mma ime azụmahịa?
N'oge na-adịbeghị anya, gọọmentị India nke Narendra Modi na-edu na-elekwasị anya na ụwa sara mbara nke ọnụ ọgụgụ na-adịghị agwụ agwụ nke mmalite na-apụta. Maka imezu nke a, gọọmentị India na-emepụta ohere na mmemme ọhụrụ. Ha na-enyere ụlọ ọrụ aka na ma ịzụlite na ọhụrụ. Enwere ọtụtụ atụmatụ gọọmentị India mere iji kwado azụmaahịa ọhụrụ. Ọ na-achọkwa ịkwalite mmepeanya nke imepụta ihe n'etiti ndị ntorobịa India. Site na uru ọnụ ọgụgụ pụrụ iche na nnukwu ọnụ ọgụgụ, India nwere ike ịkwalite ma melite azụmahịa n'otu n'otu ma rụọ ọrụ ahụ maka abamuru nke mba a na ụwa. A na-eme usoro ọ bụla iji mee ka ọganihu na uto nke obodo dị.
Akụkọ ụgbọ njem
Ụgbọ njem Nagar
Inye mkpuchi njem
Na Ụkwụ Ụgwọ
Ego Ihe Ntụgharị
Nyochaa nkọwa ụgbọ ala
Ihe mgbako dị anya
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ ABCC India Projects Cargo Corporation
Mkpokọta ụgbọ ala buru ibu nke mbụ nke India
Onye na-ahụ maka ọrụ ịkwọ ụgbọ mmiri
Nkwado ihe ejikwa ngwa ngwa na nkwakọba ihe
Nkwado ndị ahịa:- +919408275245
Mpaghara Oge India:- 8 ụtụtụ ruo elekere asatọ nke ụtụtụ
Nghọta azụmahịa, mmekorita enyi na nhazi, oke arụmọrụ, ntụzịaka kwesịrị ekwesị na nkwubi okwu kachasị elu bụ nkọwa ABCC INDIA Project Cargo Corporation. India, Nepal, Bhutan, Bangladesh 686 districts 6,49,481 ebe mgbe niile, dị mfe, ịnwetanwu, ọnụ, a pụrụ ịdabere na, preeminent, rụọ ọrụ nke ọma na-ebu Economic ọrụ, anyị ọkachamara na nsọpụrụ ebe mba niile. Anyị na-eme mgbalị ọ bụla iji mee ka nghọta na ịdị mfe nke azụmahịa ahụ site n'inye onye ọ bụla na mpaghara ọ bụla ọrụ na-aga n'ihu, nke na-adịghị ele mmadụ anya n'ihu, dị mfe na nke a pụrụ ịdabere na ya. Site na nkwubi okwu kachasị mma site na ijikọ mpaghara ọ bụla na njirimara kachasị mma na ntọala nke ụkpụrụ, echiche azụmahịa nke mba na ùgwù na-aga n'ihu na ụzọ ọganihu. Site na nke anyị enweghị ike nweta aha obodo na-emepe emepe mana obodo na-emepe emepe. Ntụnye ndị ahịa & ntụkwasị obi dị mkpa karịa ikike ụlọ ọrụ na-arụpụta ezigbo nsonaazụ, ntụkwasị obi na afọ ojuju ndị ahịa bụ nnukwu mmezu nke nzukọ anyị.
Kpọọ Ugbu a Button